Maxay yihiin qalabka bilaashka ah ee Amazon ma ogtahay?
Haddii aad ganacsigaaga ku socoto Amazon, waa inaad ogaataa in ay jiraan lacago badan oo aad u baahan tahay inaad bixiso sida Shirkadda Xirfadleyda ah. Kharashka Amazon ee dhaqameedka waxaa ka mid ah kharashka FBA ee ku-meelgaadhka ah, qorshaha bil kasta, ujrada Amazon ee ujrada iyo liiska alaabada. Kuwa ganacsatada ah ee internetka oo kaliya bilaabi doona waddada Amazon waxay dareemi karaan kuwo jahwareer ah sababtoo ah tirada kharashka ay u baahan yihiin inay bixiyaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar ka mid ah lacag la'aan ah oo tayo leh Amazon Sicirrada iibsiga ah oo faa'iido u leh ganacsigaaga internetka koraan.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa TOP free qalabka Amazon oo kor u qaadi kara darajada aad on bogga natiijada raadinta Amazon iyo kor u iibintaada - certificados panama. Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho qalabka soo socda sida ay u isticmaalaan saaxiibtinimo, xirfad iyo wax ku ool ah. Qalabka bilaashka ah ee xirfadlayaasha ah
Qalabkan xirfadlaha ahi wuxuu u adeegaa inuu ka caawiyo ganacsatada internetka si loo xisaabiyo faa'iidadooda guud ama faa'iido ay u leeyihiin alaabta ay doonayaan inay iibiyaan. Xisaabiyahan internetka ah ayaa sahlan in la isticmaalo labada iibiye ee FBA iyo FBM labadaba. Waxaad ka heli kartaa xisaabiyaha bukaanka adigoo u maraya raadinta qashinkaaga Amazon. Adeegga bilaashka ah ee Amazon wuxuu ku siin karaa adiga oo isbarbar dhiga kharashka dhabta ah inta u dhaxaysa bixintaada buuxinta amarada macaamilka ee lagu fuliyay Amazon.com. Si sax ah loo xisaabiyo faa'iidadaada hadda ama mustaqbalka, waa inaad marka hore gashaa magaca alaabtaada, UPC, EAN, ISBN, ama ASIN sanduuqa raadinta. Halkan waxaad ka heli kartaa ikhtiyaarka lagu dooran karo haddii aad rabto ujrooyinka la xisaabiyo iyadoo lagu saleynayo suuqyada aad ku iibineyso - USA, Canada, ama Mexico.
Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad doorato badeecad u dhiganta mid aad qorsheyneyso inaad iibiso. Waxaa muhiim ah in la doorto khidmadaha noocan ah ee ku habboon sababtoo ah waxay ku dabaqi doontaa xisaabinta. Halkan waxaad ku buuxin kartaa nambarada labadaba Adiga iyo Amazon. Marka dhammaan qaybta madhan ee la buuxiyo, waxaad u baahan tahay inaad gujiso "xisaabinta" badhanka.
Dhameystirka munaasibka ah
Waa barnaamij Amazon FBA ah oo kaa caawineysa inaad alaabtaada u soo qaadatid xarumaha Amazon meelmarinta. Haddii aad alaabtaada ka iibiso Amazon, goobtaada ganacsiga, ama meheradaha kale ee ganacsiga sida eBay, qalabka MCF waxay u qabataa macaamiisha adiga oo ku hadlaya magacaaga. Sidaa darteed, shirkaddaadu waxay helaysaa waaxda fulinta muddo gaaban.
Haddii aad haysato xisaab iibin xirfadle ah, waxaad xitaa ku qori kartaa liiskaaga ku-meel-gaadhka ah ee ku-meelgaarka ah adigoon wax iibinaynin alaabtaada Amazon. Wax kasta oo aad u baahan tahay waa inaad gasho taariikhda bilawga ee iibka ee mustaqbalka fog marka aad abuureyso liis garaynta alaabadaada.
Iyada oo gacan ka helaya qalabkan Amazon lacag la'aan ah, waxaad ku heli kartaa kuugu soo celinta koontadaada xarumaha fulinta Amazon. Waxaa intaa dheer, waxaad codsan kartaa in dhammaan liisaskaaga kuugu soo laabto mar kasta oo aad rabto in aad hirgeliso Xulista Qaadista.
Waxaad ubaahan tahay inaad doorato adoo samaynaya Amazon hoosta miiska ee ku yaal khariidada koontada iibiyaha. Kadibna waa inaad ka heshaa goobo dhowr ah oo kaamil ah oo ku dhufo "badal" badhan. Halkan waa inaad ku qortaa magacaaga calaamadda iyo sidoo kale cinwaankaaga internetka, lambarka telefoonka, e-mailka, iyo macluumaadka kale ee lagala xiriirayo.